Kaadhka cashuurta - InfoFinland
Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Canshuurid > Kaadhka cashuurta
Waxad u baahantahay kaadhka cashuurta (verokortti), haddii ad Finland ku qaadato mishaar ama takhliyo kale. Kaadhkaaga cashuurta waxa lagu calaamadiyay brosentajka cashuurta (veroprosentti). Kaas waa ka uu ku ogaanayo shaqo bixiyahaagu inta ay tahay in cashuur mishaarkaaga laga bixiyo. Tirada inta bqolkiiba laga goynayo waxey ku xirantahay inta uu dakhligaadu dhan yahay.
Haddii ad dhawaan u soo guurtay Finland, waxad ka heli kartaa kaadhka cashuurta xafiiska cashuuta (verotoimisto). Si ad kaadhka ashuurta u hesho waa in aad cabirtaa inta takhli ku soo galaya sanadka oo dhan. Waxanad u baahantahay lambarka aqoonsiga ee Finland. Waxad heli kartaa lambarka aqoonsiga marka ad iska diwaangaliso Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Sidoo kale lambarka aqoonsiga waxad ka heli kartaa xafiiska cashuurta. Ka akhriso macluumaad faahfaahsan bogga Isu diiwaangelin degene.
Marka ad si joogto ah ugu nooshahay Finland xafiiska cashuurta ayaa sanad kasta bisha koowaad kuu soo diraya kaadhkaaga cashuurta. Waxa lagu salaynayaa cashuurtaada intii ad sanadkii ka horeeyay shaqaysay. Tus kaarkaada canshuurta shaqo bixiyahaada. Haddii aadan tusin shaqo bixiyahaada kaarka canshuurta, shaqo bixiyuhu wuxuu mushaarkaada ka reebi karaa 60% oo cashuur ah.
Hadii takhligaagu siyaado ama hoos u dhaco sanad gudihiisa dalbo kaadh cashuur oo cusub. Waxad ka heli kartaa kaadhkaaga cashuurta:
Adeegga internetka OmaVero ee Maamulka cashuurta
Kaarka canshuurta waxaad ka dalban kartaa xittaa adeegga telefoonka ee Maamulka canshuurta:
finnish 029 497 000
iswidhish 029 497 001
ingiriis 029 497 050
Markaad dalbanayso kaadhka cashuurta ee cusub waxad u baahanaysaa macluumaadkan:
cabir ah inta ad dakhli helayso sanadkan oo dhan
takhliga ku soo galay sanadka bilowgiisa marka laga soo bilaabo
cashuurta ad ka bixisay takhligaaga sanadka bilowgiisa ilaa imika
macluumaadka ku saabsan waxyaabaha ay cashuurtu kaaga yaraanayso sanadkan
Haddii ad cashuur badan bixiso, laguu soo celinayaa, haddii cashuurtaadu yartahayna sanadka dambe ayaa lagugu soo dalacayaa.
Hubi, sida uu fayruska Korona u saameeyay adeegyada.
Dalbashada kaarka canshuurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Xisaabiyaha brosentijka cashuurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Haddii ad leedahay shaqo bixiyeyaal badan
Haddii aad leedahay shaqo bixiyayaal badan, tus dhammaantood kaarkaada canshuurta. Hal kaar oo canshuurta ah ayeey dhammaantood qaadanayaan. Shaqooyinka oo dhan waxaad ka bixineysaa canshuur isle’eg.
Kaarkaada canshuurta waxaa ku qoran xad dakhliyeed oo xisaabinta boqolkiiba inta loo jarayo canshuur ahaa lagu saleeyo. Xusuunow in aad ilaaliso xadka dakhligaada. Haddii aad hesho mushaar ka badan inti aad gudbisay, xadka dakhligaada waad dhaafeysaa. Haddii uu dakhligaadu dhaafo xadkiisa, dalbo kaarka canshuurta oo cusub.
Waxad u baahantahay lambarka cashuurta(veronumero), haddii ad ka shaqaynayso Finland dhul dhismo ama rakibaad ay socoto. Lambarka cashuurta waxa loo isticmaalaa in lagula socdo in ay shaqaalaha oo dhan ka diwaangashanyihiin diwaanka Maamulka cashuurta. Lambarka cashuurtu waa in uu ka muuqdaa kaahkaaga aqoonsiga ah ee sawirka leh ee uu ku siinayo shaqobixiyahaagu. Aqoonsigaas la’aantii kama shaqayn kartid dhulka dhismaha.
Lambarka cashuurta waxad ka helaysaa xafiiska cashuurta marka ad dalbanayso kaadhka cashuurta.
Haddii ad aqoonsi Finish ah leedahay, waxad ka heli kartaa lambarkaaga aqoonsiga kaadhkaaga cashuurta.
Nambarka canshuurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 28.04.2021 Boggan war-celin ka soo dir